औठी ब्रालेट लगाएर उर्फी जावेदले गरिन् यस्तो माग ! मानिसहरूले भने- अझै छोटो लुगा छैन ? – www.agnijwala.com
सबैभन्दा विवादित रियालिटी शो ‘बिग बोस’ को घरमा धेरै सेलिब्रेटीहरू आफ्ना गतिविधिका कारण हेडलाइन बन्छन्। तर यसबाहेक ‘बिग बोस ओटीटी’की प्रतियोगी उर्फी जावेद बिग बोसको घरबाट बाहिरिएपछि पनि लगातार आफ्नो अनौठो फेसन अफेयरको विवादको शिकार बनिरहेकी छिन् । जबदेखि उनी शोको हिस्सा बनेकी छिन्, उनी आफ्नो हट स्टाइलले लगातार इन्टरनेटको तापक्रम बढाउनका लागि चर्चित भइन्। अब फेरि एकपटक उर्फीको अनौठो फेसनले सामाजिक सञ्जालमा पनि हंगामा मच्चाएको छ ।
रिंग ब्रालेट लगाएको पोज
वास्तवमा उर्फी जावेदले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टबाट केही तस्बिर सेयर गरेका छन् । जसलाई देखेर नेटिजनहरुको मन तातेको छ । यी तस्विरहरूमा, उर्फी पशु प्रिन्टको ब्रालेट र कम्मरमा उही प्रिन्टको स्कार्फ बेरेको देखिन्छ। यो पोशाकमा उर्फीको परफेक्ट फिगर देखिन्छ । हेर्नुहोस यी तस्विरहरु…
फ्यानहरुको यो माग हो
यी तस्विरहरूमा विशेष कुरा यो छ कि उर्फी जावेद मध्य लुकमा देखिएकी छन्। साथै, उनले क्याप्शनमा लेखेका छन्, ‘म गोवा घुम्न चाहन्छु, सधैं एक बिच बेबी।’ यसको छेउमा उर्फीले लेखेका छन्, ‘कमेन्टमा आफ्नो मनपर्ने बिच गन्तव्य लेख्नुहोस्।’ मानिसहरूले कमेन्टमा गोवा, माल्दिभ्स, बालीको नाम लेखिरहेका बेला केहीले फेरि अभिनेत्रीलाई उनको छोटो लुगालाई निशाना बनाएर ट्रोल गरेका छन् । एकजनाले लेखे- अनि छोटो लुगा छैन ?
ब्याकलेस अवतार पनि अचम्मको थियो
उर्फी जावेदले यसअघि इन्स्टाग्राममा एउटा भिडियो सेयर गरेकी थिइन् । यस भिडियोमा उर्फी जावेदले आफ्नो पीठलाई कूल स्टाइलमा फ्लान्ट गरेको देखिन्छ। उनको टप हेर्दा घाँटीमा कपडा लगाएर टप बनाएको देखिन्छ । यो भिडियो हेर्नुहोस…
उर्फीले बिग बोसको घरमा खासै अचम्मको काम गर्न सकिनन। तर घरबारविहीन भएदेखि उनी अहिले सम्मको सबैभन्दा चर्चित अभिनेत्रीको रुपमा उभिएकी छिन् ।